Google ရဲ့ Street View Photo တွေအတွက် ဓါတ်ပုံဘယ်လိုရိုက်ကူးသလဲ ?
4 Mar 2018 . 6:08 PM
Google Street View ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကျ Google Map ( Satellite View) လိုမဟုတ်ပဲ ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကို ၃၆၀ ဒီဂရီ လှည့်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် လမ်းပေါ်မှာ လိုက်ကြည့်နေတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကိုရရှိစေပါတယ်။ နောက်ထပ် အားသာချက်တစ်ခုကတော့ အထင်ကရ အဆောက်အဦးတွေထဲကိုပါ ကိုယ်တိုင်ဝင်ကြည့်သလိုမျိုးဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲ့လိုပုံတွေရရှိဖို့အတွက် Google ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ဝန်ထမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ နေရာအနှံ့ ဓါတ်ပုံတွေလိုက်လံရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်။ အခုလည်း ရိုက်ကူးနေဆဲပါ။
ဒီလိုဓါတ်ပုံတွေဟာ ၃၆၀ ပတ်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် ပုံမှန်ရိုက်ကူးနေကြ Camera တွေနဲ့တော့ရိုက်ကူးလို့မရပြန်ပါဘူး။ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ Sensor ပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ Camera တွေနဲ့ ဘယ်လိုရိုက်ကူးသလဲဆိုတာ အခရာ Fans တွေအတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
Street View Car များဖြင့်လိုက်လံရိုက်ကူးခြင်း
ကားရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်မှာ 360 Camera တွေတပ်ဆင်ပြီးရိုက်ယူတာဖြစ်ပါတယ်။
STREET VIEW TREKKER များဖြင့် လမ်းလျှောက်ရိုက်ကူးခြင်း
ကားနဲ့သွားလို့မရတဲ့နေရာတွေမှာတော့ ခြေလျှင်လမ်းလျှောက်တဲ့ Camera Operator တွေနဲ့ရိုက်ကူးရပါတယ်။ ၄င်းတို့အတွက် Google က Camera တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကျောပိုးအိတ်တွေပေးထားပါတယ်။
နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ တောတောင်ဝန်းကျင်တွေအတွက် ဒီလိုရိုက်ကူးကြပါတယ်။
STREET VIEW TROLLEY ဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်း
အဆောက်အဦးတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ ဒီလို အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့လက်တွန်းလှည်းလေးတွေနဲ့လိုက်လံရိုက်ကူးပါတယ်။ လူကိုယ်တိုင်လမ်းလျှောက်ရိုက်လို့ရပေမယ့် ပုံရိပ်ပိုမိုတည်ငြိမ်ရန်နဲ့ Camera Operator အတွက်သက်သောင့်သက်သာရှိစေဖို့နဲ့ အခြားပြုလုပ်ချက်တွေကိုပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
ဒီလို TROLLEY တွေနဲ့ ပြတိုက် ၊ ခန်းမတွေ ၊ အားကစားကွင်းတွေနဲ့ သမတ္တအိမ်ဖြူတော်လိုနေရာမျိုးတွေမှာလိုက်လံရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။
STREET VIEW SNOWMOBILE များဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်း
ရေခဲတောင်တွေ နဲ့ နှင်းတောလမ်းတွေမှာတော့ SNOWMOBILE လို့ခေါ်တဲ့နှင်းလျှောစီးယာဉ်တွေနဲ့လိုက်လံရိုက်ကူးပါတယ်။
STREET VIEW TRIKE များဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်း
အချို့သောအထင်ကရနေရာတွေ ၊ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်များတည်ရှိရာအဆောက်အဦးတွေမှာ ကားဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ လမ်းတွေကျဉ်းတဲ့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုနေရာတွေက ခရီးသွားတွေ အရမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာမျိုးတွေဖြစ်ပြီးအလွန်လှပတဲ့မြင်ကွင်မျိုးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် Google ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေက လမ်းကျဉ်းတွေမှာသွားလို့ရမယ့် သုံးဘီးတပ်စက်ဘီးကိုဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ Camera Operator အနေနဲ့ စက်ဘီးနင်းနေရုံနဲ့ ကင်မရာက အလိုလျောက်ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Google cyclist Rhys Griffiths က Mexico နိုင်ငံရှိ ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်စာရင်းဝင် Stonehenge တွေကိုဓါတ်ပုံလိုက်လံရိက်ကူးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Google အနေနဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းငါးမျိုးနဲ့ Street View အတွက် ဓါတ်ပုံများလိုက်လံရိုက်ကူးလျှက်ရှိသလို တစ်ခါတစ်လေ ဗဟုသုတ အားနည်းတဲ့ကျေးလက်ဒေသလိုနေရာမျိုးတွေရောက်သွားရင်တော့ သူလျှိုလို့အစွပ်စွဲခံရကာ တားစီးပိတ်ပင်ခံရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
ဒီပုံကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ ကျေးရွာတစ်ခုမှာ ရွာသားတွေက မသင်္ကာမှုနဲ့တားစီးခံထားရတဲ့ Google Street View ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။
ခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ သင်ကိုယ်တိုင် Google Street View App ကို ဖုန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြီး ၃၆၀ ပတ်လည်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကူးကာ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Google ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို အိမ်ထဲကနေ နေရာအနှံ့သွားလို့ရအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။
Google ရဲ့ Street View Photo တှအေတှကျ ဓါတျပုံဘယျလိုရိုကျကူးသလဲ ?
Google Street View ဆိုတာကတော့ ကြှနျတျောတို့ပုံမှနျမွငျတှနေ့ကြေ Google Map ( Satellite View) လိုမဟုတျပဲ ပတျဝနျးကငျြအားလုံးကို ၃၆၀ ဒီဂရီ လှညျ့လညျကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။ ကိုယျတိုငျ လမျးပျေါမှာ လိုကျကွညျ့နတေဲ့ ခံစားခကျြမြိုးကိုရရှိစပေါတယျ။ နောကျထပျ အားသာခကျြတဈခုကတော့ အထငျကရ အဆောကျအဦးတှထေဲကိုပါ ကိုယျတိုငျဝငျကွညျ့သလိုမြိုးဝငျရောကျလလေ့ာနိုငျပါသေးတယျ။ အဲ့လိုပုံတှရေရှိဖို့အတှကျ Google ဟာ နှဈပေါငျးမြားစှာကွာအောငျ ဝနျထမျးပေါငျးမြားစှာနဲ့ နရောအနှံ့ ဓါတျပုံတှလေိုကျလံရိုကျကူးခဲ့ရပါတယျ။ အခုလညျး ရိုကျကူးနဆေဲပါ။
ဒီလိုဓါတျပုံတှဟော ၃၆၀ ပတျလညျကွညျ့ရှုနိုငျဖို့အတှကျ ပုံမှနျရိုကျကူးနကွေ Camera တှနေဲ့တော့ရိုကျကူးလို့မရပွနျပါဘူး။ အထူးပွုလုပျထားတဲ့ Sensor ပေါငျးမြားစှာပါဝငျတဲ့ Camera တှနေဲ့ ဘယျလိုရိုကျကူးသလဲဆိုတာ အခရာ Fans တှအေတှကျ ပွနျလညျဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။
Street View Car မြားဖွငျ့လိုကျလံရိုကျကူးခွငျး
ကားရဲ့ခေါငျမိုးပျေါမှာ 360 Camera တှတေပျဆငျပွီးရိုကျယူတာဖွဈပါတယျ။
STREET VIEW TREKKER မြားဖွငျ့ လမျးလြှောကျရိုကျကူးခွငျး
ကားနဲ့သှားလို့မရတဲ့နရောတှမှောတော့ ခွလြှေငျလမျးလြှောကျတဲ့ Camera Operator တှနေဲ့ရိုကျကူးရပါတယျ။ ၎င်းငျးတို့အတှကျ Google က Camera တပျဆငျထားတဲ့ ကြောပိုးအိတျတှပေေးထားပါတယျ။
နာမညျကြျောကွားတဲ့ တောတောငျဝနျးကငျြတှအေတှကျ ဒီလိုရိုကျကူးကွပါတယျ။
STREET VIEW TROLLEY ဖွငျ့ရိုကျကူးခွငျး
အဆောကျအဦးတှထေဲမှာဆိုရငျတော့ ဒီလို အထူးပွုလုပျထားတဲ့လကျတှနျးလှညျးလေးတှနေဲ့လိုကျလံရိုကျကူးပါတယျ။ လူကိုယျတိုငျလမျးလြှောကျရိုကျလို့ရပမေယျ့ ပုံရိပျပိုမိုတညျငွိမျရနျနဲ့ Camera Operator အတှကျသကျသောငျ့သကျသာရှိစဖေို့နဲ့ အခွားပွုလုပျခကျြတှကေိုပါထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။
ဒီလို TROLLEY တှနေဲ့ ပွတိုကျ ၊ ခနျးမတှေ ၊ အားကစားကှငျးတှနေဲ့ သမတ်တအိမျဖွူတျောလိုနရောမြိုးတှမှောလိုကျလံရိုကျကူးခဲ့ကွပါတယျ။
STREET VIEW SNOWMOBILE မြားဖွငျ့ရိုကျကူးခွငျး
ရခေဲတောငျတှေ နဲ့ နှငျးတောလမျးတှမှောတော့ SNOWMOBILE လို့ချေါတဲ့နှငျးလြှောစီးယာဉျတှနေဲ့လိုကျလံရိုကျကူးပါတယျ။
STREET VIEW TRIKE မြားဖွငျ့ရိုကျကူးခွငျး
အခြို့သောအထငျကရနရောတှေ ၊ ကမ်ဘာ့အမှအေနှဈမြားတညျရှိရာအဆောကျအဦးတှမှော ကားဝငျရောကျခှငျ့မရှိပါဘူး။ လမျးတှကေဉျြးတဲ့အတှကျလညျးဖွဈပါတယျ။ အဲ့လိုနရောတှကေ ခရီးသှားတှေ အရမျးစိတျဝငျစားတဲ့နရောမြိုးတှဖွေဈပွီးအလှနျလှပတဲ့မွငျကှငျမြိုးတှရှေိနတေတျပါတယျ။ ဒီ့အတှကျ Google ရဲ့ အငျဂငျြနီယာတှကေ လမျးကဉျြးတှမှောသှားလို့ရမယျ့ သုံးဘီးတပျစကျဘီးကိုဖနျတီးပေးထားပါတယျ။ Camera Operator အနနေဲ့ စကျဘီးနငျးနရေုံနဲ့ ကငျမရာက အလိုလြောကျဓါတျပုံရိုကျကူးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
Google cyclist Rhys Griffiths က Mexico နိုငျငံရှိ ကမ်ဘာ့ရှေးဟောငျးအမှအေနှဈစာရငျးဝငျ Stonehenge တှကေိုဓါတျပုံလိုကျလံရိကျကူးနတောပဲဖွဈပါတယျ။
Google အနနေဲ့ အထကျဖျောပွပါ နညျးလမျးငါးမြိုးနဲ့ Street View အတှကျ ဓါတျပုံမြားလိုကျလံရိုကျကူးလြှကျရှိသလို တဈခါတဈလေ ဗဟုသုတ အားနညျးတဲ့ကြေးလကျဒသေလိုနရောမြိုးတှရေောကျသှားရငျတော့ သူလြှိုလို့အစှပျစှဲခံရကာ တားစီးပိတျပငျခံရတာမြိုးတှလေညျးရှိပါသေးတယျ။
ဒီပုံကတော့ ထိုငျးနိုငျငံ ကြေးရှာတဈခုမှာ ရှာသားတှကေ မသင်ျကာမှုနဲ့တားစီးခံထားရတဲ့ Google Street View ကားတဈစီးဖွဈပါတယျ။
ခုလကျရှိအခြိနျမှာတော့ သငျကိုယျတိုငျ Google Street View App ကို ဖုနျးထဲမှာထညျ့သှငျးပွီး ၃၆၀ ပတျလညျကွညျ့ရှုနိုငျတဲ့ ဓါတျပုံတှရေိုကျကူးကာ ပူးပေါငျးပါဝငျနိုငျနပွေီဖွဈပါတယျ။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ Google ရဲ့လုပျဆောငျခကျြတှကေတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ကမ်ဘာကွီးကို အိမျထဲကနေ နရောအနှံ့သှားလို့ရအောငျ ဖနျတီးပေးခဲ့ပါတယျ။